Qaxootiga Soomalida Ee Yemen kasoo qaxay Oo Lagu baaqay in La Gar gaaro - iftineducation.com
Qaxootiga Soomalida Ee Yemen kasoo qaxay Oo Lagu baaqay in La Gar gaaro
iftineducation.com – Ururka haweenka gobolka bari ayaa kormeer ku tagay xarunta ay dagan yihiin dadka qaxotiga ah ee ka soo cararay colada dalka yaman dib uga qaraxday.
Dadkani ka soo cararay colada dalka yaman ayaa aha kuwo dhib badan ay ku haysato xarunta ay dagan yihiin ee ku tala jidka sodonka bosaso.
Xiligii u qarxay dagalkii u dhexeyay dolwda dalka yaman iyo koxda mucaradka ah ee xutiyiinta dalka yaman ayaa waxa somaliya dib ugu soo noqo nayay somali mudo ku ceshi jirtay dalka yaman iyo muwadiniin u dhashay dalka yaman oo ka soo cararay dagalada iyo duqaymaha dalkasi ka dhacaya.
Gudomisada haweenka gobolka bari oo boqatay dadka ku dhacan xerada kana soo cararay dalka yaman ayaa waxay ka damqatay dhibta haysata iyago anan haysan cunto biyo iyo canahii ay siin lahayeen caruurta aadka u yar yar ee xaruntani ku jirta.
Maryan Maxamed Xasan (Maryan gaduudo) oo ah gudomisada haweenka gobolka bari ayaa si qiraysan uga hadashay dhibka ay ku soo aragtay xarunta ay ku jiraan qaxotiga ka soo labtay dalka yaman.
baar xasan oo qayb ka ah ururka haweenka gobolka bari ayaa shegtay in dadka ka soo qaxay dalka yaman ay u bahan yihiin in lo gurmado.
bilowgii bishii 4aad ee sanadkii tagay ayay ahayd markii dadka ka soo cararaya dalka yaman ee magalada bosaso soo garaan.
shacka ku nool bosaso iyo dowlada ayaa gurmad la garab istaagay waxana laga bahi tiray wax walba ay u bahnayeen haday ahaan la hayd cafimadka cuntada biyaha iyo caanaha caruurta ay sisan jireen hoyoyinka soo labtay.
shacabka iyo dowlada ayaa waxa loga bahan yahay inay garab istaagan dadka mar kale ku soo labanaya bosaso.
Afhayeenka dumarka wejibook miyaa hee
Daawo Sawirada :Turkiga oo Madaafiic & Hub casri ah geeyay Xuduudaha dalkaas iyo Amniga oo aad loo adkeeyay